Umbala kanjani phansi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Umbala kanjani phansi
Hlela: UDenny　2020-01-06　Iselula
Kunezinhlobo ezimbili zokupenda phansi: omunye umbala wemvelo, kanti omunye umbala.
Umbala wemvelo ukuthi awenzi ukwelashwa kombala lapho ucubungula, futhi usifanekisela isimo sokhuni sangempela.
Kunezinhlobo ezimbili zokubala imibala: Umbala okhanyayo nokufakwa umbala okujulile.
Umbala okhanyayo ukwenza umbala wezinkuni ube muhle ngokwedlulele, ngokusekelwe kumbala wezinkuni, unombala omncane, njengokwenza ukukhanya. Umbala onjalo awunamphumela kwikhwalithi yaphansi ngokwayo.
Amabala amnyama ahlukile.Izingi eziningi ezimnyama ezakhiwe phansi zenzelwe ukumboza iziphambeko zazo, njengamehlo ezinambuzane, ukubola, kanye nezinkuni.Uma amaphutha angathi sína, udinga ukugcwalisa amehlo ezinambuzane ngamafutha, bese usebenzisa imibala emnyama ukumboza izingxenye ezilungisiwe.
Lokhu kuthinta ngqo ukunamathela kwepende yaphansi, ngoba amafutha agcwele izinkuni azokwehlukanisa izinkuni upende, ukuze upende lungakwazi ukumunwa kahle ngokhuni. Isitezi sombala esimnyama sibukeka sincane kakhulu futhi amaphethini ayifiphele. Ingenawo umuzwa wemvelo wezinkuni. Isitezi esinjalo sithambekele ekuqhekeni upende siyasetshenziswa, kanti esinye saso singawa endaweni yangakini.
Umbala kanjani phansi Okuqukethwe okuhlobene